Sida Loo Qoro Jeegga: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Bogga ugu weyn Sida Loo Qoro Jeegga: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
Qofna ma rabo in lagu dhibo qaadista lacag caddaan ah oo badan maxaa yeelay inta badan lagama maarmaan inta badan. Qof walba maalmahan lacag la’aan ayuu ku socdaa! Tusaale ahaan, haddii wax iibsi loo baahan yahay in la sameeyo, kaarka amaahda ama kaarka deynta ayaa la isticmaalaa; Haddii shirkadu rabto inay lacag bixiso, jeeg ayaa qoran ama wareejin ayaa la sameeyaa.
Iyada oo la adeegsanayo jeegag, macaamilka bangiga ayaa la fududeeyay oo la kala duwanaaday taas oo siineysa isticmaaleyaasha fursad ay ku doortaan habka ay u doorteen macaamilka (wareejinta, kaarka, jeegga/jeegga).
Maqaalkan, waxaan ku iftiimin doonnaa faahfaahinta qallafsan ee ku saabsan jeegga, diiradda saaraya sida loo qoro si ammaan ah oo aan ku siin doonno tillaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan qaybaha lagama maarmaanka u ah jeegga.
Waa Maxay Jeeg?
Waa Maxay Sida Ugu Nabdoon Ee Loo Qoro Jeegga?
Sideed U Qortaa Jeegaga Jeegaga Madhan?
Ma Ku Qori Karaa Jeegga Internetka?
5ta Qaybood ee Muhiimka ah ee Jeegga (oo lagu daray gunno)
Habka ugu Wanaagsan ee Loo Qoro Jeegga: Tilmaan-tallaabo
Waxaan sidoo kale ku talinaynaa
Jeeggu waa dukumenti sharci ah oo u oggolaanaya bangiga inuu lacag ka bixiyo koontadaada jeegga qof kale. Markaad furato koonto jeeg, bangigaagu wuxuu ku siin doonaa jeegag madhan oo loo yaqaan jeegaga bilowga ama jeegagga miiska.
Nasiib darro, dadka intooda badani waxay doorbidaan inay adeegsadaan habka wareejinta iyo kaarka, sidaa darteed, waxay dayaceen jeegga. Tani badanaa waa sababta oo ah isticmaaleyaal badan ayaan aqoon u lahayn habka loo qoro jeeg. Sidoo kale, waxaad moodaa in dadku aysan aad ugu qanacsanayn sida loo hubiyo bixinta kaarka.
ARAG SIDOO KALE: Sida Lacag Loogu Sameeyo Jeegga Lacag -Hayaha Intarneedka Waqti Yar | Cusboonaysiinta 2021
Si aad si ammaan ah u qorto jeeg, talaabooyinkan waxay u baahan yihiin in la raaco:
Hubi in qalin qalin khad madow la isticmaalay
Qaddarka si adag u qor (yaree meelaha u dhexeeya tirooyinka)
Sawir xariiq ka dib markaad qaddarto qaddarka (si aad u garaacdo booska haray)
Hubi in “VOID” ay ku qoran tahay jeegga la baajiyay ka hor inta aadan jarin
Marna ha ku darin macluumaadka shaqsiga jeegga
Jeegga madhan waa jeeg uu oggolaaday (saxeexay) milkiilaha jeega ka hor inta aan la xisaabin macluumaadka kale (taariikhda, bixiyaha, iyo cadadka).
Tusaalaha tan waa marka shirkad ay jeeg siiso qof la aamini karo ka hor 4-maalmood oo sabti ah. Tani waxay fursad siineysaa qofka la aamminay inuu fursad u yeesho inuu soo geliyo macluumaadka lagama maarmaanka ah marka loo baahdo.
Si aad u qorto jeeg bannaan, waxa kaliya ee loo baahan yahay waa saxeexa la oggolaaday si qofka qaataha ahi uu lacag uga helo jeegga ka dib markuu buuxiyo faahfaahinta kale.
Akhri ALSO: Sida Loo Adeegsado Jeegaga Ballaadhan Si Loogu Muujiyo Lacagtaada 2021
Jeegga elektaroonigga ah ama halkii eCheck waa hab lacag -bixin ah oo loo abuuray macaamiisha aan doonayn inay ku dhibtoodaan dhibka jeegga qoran (u -diridda boostada ama kaashka jeegga). Waa la buuxin karaa oo waa la diri karaa onlaynka, taas oo nuxur ahaan loo tixraaci karo jeeg onlayn ah.
Sababtoo ah adduunku xoogaa aad buu ugu sii janjeersan yahay xagga teknolojiyadda hadda ka hor, waxay noqotay lama huraan in la helo dhammaan qaababka macaamil ganacsi oo laga heli karo internetka. Si aad u bixisid jeeg onlayn ah ama eCheck dhammaan waxa loo baahan yahay waa lambarka akoonka macmiilka iyo lambarka waddada bangiga.
Si eCheck si ammaan ah loo xareeyo, waa tan waxa loo baahan yahay in la sameeyo:
Buuxi meelaha ku taxan macluumaad gaar ah oo ay codsadeen madal -bixinta
Ku dar magaca koontada bangiga iyo magaca bangiga (haddii aad isticmaaleyso barxad dibadeed)
Ku dar qaddarka loogu talagalay oo u baahan in la bixiyo
Tilmaan taariikhda aad rabto in jeegga la dhajiyo
Geli koodhka waddada bangigaaga iyo lambarka koontadaada
FIIRO GAAR AH: Macluumaadka la codsaday wuu kala duwanaan karaa iyada oo ku saleysan madal -bixinta lacag -bixinta ee uu doortay macaamilka. Si kastaba ha ahaatee, koodhka waddada bangiga ayaa lagama maarmaan u ah in la yeesho dhammaan macaamil ganacsiyeedyada.
LA XIDHIIDH BADAN: Top 10 Software Xisaabaadka Ganacsiga Yaryar ee 2021
Waxaa jira 5 qaybood oo muhiim ah oo ka mid ah jeegga oo u baahan in la qoro si looga hortago in jeeggu soo boodo. Tan micnaheedu waa haddii jeegga aan si sax ah loo qorin ama haddii ay jiraan khaladaad ku jira jeegga, waxaa loo celin lahaa soo -bixiyaha jeegga.
Waxay ku xiran tahay marka aad rabto in jeegga lacag caddaan ah la bixiyo, waxaa aad muhiim u ah in taariikhda lagu qoro jeegga. Qeybta taariikhdu inta badan waxay ku taal geeska midig ee kore ee jeegga. Haddii aadan doonaynin in jeegaaga si dhaqso ah loo bixiyo, waxaad dib-u-dhigi kartaa jeeg si aad u hubiso in la bixin doono maalmo ka dib marka jeegga marka hore la soo diro.
Ku qorista magaca qofka qaata jeegga ayaa ka horjoogsanaysa in uu galo gacmo khaldan. Xusuusnow, waxaa fiican inaad ammaan ahaato intii aad ka xumaan lahayd.
Muuji caddadka aad rabto inaad ku bixiso tirooyinka.
Haddii ay dhacdo in meel qalad ka jiro (iska ilaali inaad qaladaad samayso) xaddiga erayada ayaa ah inaad xoogga saarto xaddiga la doonayo ee aad rabto inaad bixiso.
La'aanta saxeex la oggol yahay, jeeggu wuxuu u fiican yahay mid aan waxtar lahayn. Hubi inaad saxeexday inay tahay waxa ugu dambeeya ee la saaro jeegga haddii khaladaad la sameeyo inta lagu guda jiro qoritaanka jeegga.
Tani waa uun si loo muujiyo ujeeddada jeegga. Meesha xusuusta, waxaad ku qori kartaa haddii jeeggu yahay biil ama dhacdo, wax kasta oo ay noqon karto. Kaliya iska hubi inay gaagaaban tahay oo dhibicda tahay (2-3 eray).
Aan kula hadalno habka qoritaanka jeegga. Soo bixi buugga jeeggaaga iyo qalin (oo doorbidaya madow) oo aan u gaarno.
Markaad jeeggaaga hortaada gasho, waxaad u baahan tahay inaad qorto TAARIIKH. Tani waxay xaqiijin doontaa in adiga iyo helaha aad heshaan diiwaanka saxda ah ee macaamilka.
Marka xigta, laynka oranaya ku bixin amarka, taasi waa meesha aad tilmaamayso PAYEE/QAADASH. Haddii aad jeeg u qorayso urur, markaa waxaad u baahan doontaa inaad qorto magaca ururka. Si kastaba ha ahaatee, haddii jeegga ay tahay inuu qof helo, waxaad u baahan doontaa inaad sheegto magaca qofka oo buuxa. Hubi in warku sax yahay haddii kale qofka lacag -bixiyaha ah looma oggolaan doono inuu jeega kaash bixiyo.
Taas ka dib, waxaad u baahan doontaa inaad qorto qoraalka QIIMAHA SHAQOOYINKA. Sida caadiga ah waxaa lagu siiyaa sanduuq yar si aad ugu qorto tirooyinka. Markaad tan qorayso, hubi inaad lambarka ka bilowdo geeska sanduuqa oo aad si adag u qorto tirooyinka si aad uga fogaato isbeddel. Ku dhufo booska dheeraadka ah haddii ay jirto.
Markaa waad sii wadi kartaa si aad u qorto TIRADA EREYADA. Tani waxay u adeegi doontaa cadadka rasmiga ah ee bixintaada. Haddii ay jiraan wax khalad ah oo ku jira tirooyinka, ereyada waxaa loo qaadan doonaa qaddar sharci. Hubi inay ku qoran tahay XARUMAHA WAAWEYN oo weliba ku dhufo meesha bannaan si aad uga fogaato isbeddel.
Waa waqtigii ugu dambeeyay SIGN jeeggaaga. Xaqiiji in saxeexaagu si sharci ah loo sameeyo. Xusuusnow in tani ay aad muhiim u tahay maadaama jeegga la burin karo iyada oo aan la saxiixin oggolaansho.
Waa inay jirtaa qaybta xusuusta ama 'EE' qaybta aad ku tilmaami karto ujeeddada jeegga. Tani waa mid ikhtiyaari ah oo gebi ahaanba adiga ayay kugu xiran tahay. Si loo helo diiwaanada saxda ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagugula talinayaa inaan sidoo kale buuxiyo.
FIIRO GAAR AH: Jeegaga badankoodu waxay qaataan laba maalmood oo shaqo si loo maro, markaa hubso in isticmaalka jeeggu uusan ahayn mid degdeg ah.
Akhri ALSO: 13 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Hantida Ma guurtada Ah Iyadoo Lacag La'aan 2021
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa bangiga si loo hubiyo jeegga?
Waxay qaadanaysaa bangiga ugu yaraan laba maalmood oo shaqo si loo hubiyo jeegga. Hase yeeshee, haddii jeeg la bixin lahaa, waxaa lagu samayn karaa laba daqiiqo gudahood.
Maxaad samaynaysaa haddii aad jeega ku qorto qaddar khaldan?
Haddii aad qalad samaysid markaad jeeg qoraysid, sida caadiga ah waxaa fiican inaad iska tirtirto oo aad dib u bilowdo. Haddii tani aysan ahayn ikhtiyaar ama qaladkaaga la hagaajin karo, soo dhex mari xariiq hagaagsan oo toos toos ugu qor qallinka. Si lagaaga caawiyo xaqiijinta sixitaankaaga, ku bilow.
Yaa sharci ahaan jeega u dhiibi kara?
Qofka kaliya ee si sharci ah jeeg u bixin kara waa kan qaata jeegga.
Muddo intee le'eg ayuu jeegga madhan ansax yahay?
Sababtoo ah ma jirto taariikh ku qoran jeeg bannaan, waxay ahaan doontaa mid ansax ah ilaa ay ku qorto taariikh.
Sideen ku ogaadaa in jeeggu dhab yahay?
Jeegaga badankoodu waxay leeyihiin dalool daloolan ama qallafsan sidaa darteed haddii dhammaan cidhifyadu siman yihiin, markaa waxaa jirta fursad sare jeeggu waa been abuur. Sidoo kale, jeegga been -abuurka ah ma laha astaan ​​bangi ama wuxuu leeyahay astaan ​​bangi oo duugoobay.
In kasta oo jeegaggu uu xoogaa ka sii baxayo, ogaanshaha sida loo qoro si habboon ayaa faa'iido weyn leh. Tani waxay si gaar ah u tahay marka ay timaado bixinta biilasha iyo bixinta jeegaga ururada. Waxaan rajeyneynaa, inay tani awood u yeelatay inay kaa caawiso inaad barato sida loo qoro jeegga habka habboon.
Sida loo qoro Jeeg: 7 Tallaabo oo Tusaalooyin leh
Waa maxay Jeegga Madhan?
Sida Loo Qoro Jeegaga Elektaroonigga ah
Sida Lacag Loogu Sameeyo Jeegga Lacag -Hayaha Intarneedka Waqti Yar | Cusboonaysiinta 2021
Kaararka Amaahda ee APR ee Hooseeya 9 | Fiiri Xiisaha
Sida loo hubiyo haddii Kaarka Amaahdu uu shaqeynayo | Tilmaamaha Tallaabada-2021
15 Barnaamijyada Wadaagga Kharashka ugu Fiican Sanadka 2021
Mudo intee le'eg ayay Jeegaga Shakhsi ahaan u Fiican yihiin?
15 Barnaamijyada Maalgashiga ugu Fiican 2021
Sida Loo Helo Internet La'aan Cable | Tallaabo Fudud oo Tusaha Tallaabada ah
Waa maxay Securities in Finance? Guudmarka iyo Sida ay u Shaqeyso
Software -ka Maaliyadda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Sanadka 2021
10ka Buundo Ee Ugu Khatarsan Adduunka 2022ka
Maxaad ka maqashay buundooyinka? Sideed u aragtaa inaad ka gudubto ama aad baabuur waddo? Ma u malaynaysaa…
10 -ka Ragga Ugu Khatarsan Adduunka 2021 -ka
Laga soo bilaabo meesha ugu sarreysa ee Isis ilaa maskaxda ka dambaysa Boko Haram, qof kasta oo u maleeyay in ilmo quruxsan uu…
20 Darawalada Uber ee Lacagta Ugu Badan Bixiya | Dawladaha Ugu Fiican
Uber iskama dhigto adeeg tagsi, si ka duwan adeegyada tagaasida dhaqameed, ee u baahan inaad u yeedho…
Daqiiqad 8 akhri
10 -ka Barnaamijyada ugu wanaagsan ee Navigation -ka Android ee Bilaashka ah 2022 -ka
Inta badan waxaan ku weydiinaa su'aalo agagaarka mar kasta oo aan isku dayeyno inaan helno meel loo socdo. Tani waa khatar sida…
10 -ka Fiski ee ugu Qaalisan Adduunka 2021 -ka
'Whiskey on the rocks' waa odhaah caadi ah oo laga soo rogmado ama laga soo roggo xarfaha jilayaasha...
10 Lacag -bixinta PhD -da ugu Sareeya ee La Bixiyo | Jaamacadaha ugu Fiican
Shahaadada PhD waa shahaadada ugu sarraysa ee jaamacaddu siiso arday. Erayga PhD waa…
QORSHE MAALIYEED VS LA-TALIYAHA MAALIYADA: MAXAY FARQADU?
Sida Loo bilaabo Koontada Maalgelinta Carruurtaada?
Sida Ganacsiga Loogu Iibiyo 10 Tilaabo Oo Fudud
20 Waxyaabo Fudud Oo La Sameeyo Oo La Iibiyo
10ka Alaabta Dijital ah ee ugu Wanaagsan ee La Iibinayo 2022